Umkhiqizi kanye noMphakeli waseChina Methyl Gallate (Ibanga Lombane) Sanjiang
Igama lomkhiqizo: I-Methyl gallate (Ibanga le-elektroniki)
Imethyl gallate iyinhlanganisela ye-phenolic. Yi-methyl ester ye-gallic acid.
Isibizo: I-Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate; i-methyl 3,4,5-trihydroxy benzoate
Ifomula Yamamolekhula: C8H8O5
Isisindo Yamamolekhula: 184.1461
Igama lesiNgisi: Imethyl gallate
Ubuningi: 1.501g / cm3
Isibizo: Imethyl gallate
Iphoyinti le-Flash: 190.8 ℃
Iphuzu lokuncibilika: 201-203 ° C
Iphuzu lokubilisa: 450.1 ℃ ku-760mmHg
Ukupakisha: Ibhakede lamakhadibhodi angama-25kg
I-prismatic crystal ye-Monoclinic (methanol). Iyancibilika emanzini ashisayo, i-ethanol （10 mg / ml）, i-ether Isetshenziswa njengesixhumanisi se-biphenyl bisphenol nezinye izidakamizwa. Futhi njenge-antioxidant yenjoloba
IMethyl gallate, eyaziwa nangokuthi i-methyl 3 noma i-methyl galloic acid, iyilungu lesigaba samakhemikhali aziwa njenge-galloyl esters. Ama-Galloyl esters ayizinhlanganisela eziqukethe i-ester esuselwa ku-3,4,5-trihydroxybenzoic acid. IMethyl gallate incibilika kancane (emanzini) kanye nenhlanganisela ebuthaka kakhulu (esuselwa ku-pKa yayo). IMethyl gallate itholakala kupentshisi kanye nepomegranate, okwenza i-methyl gallate ibe yi-biomarker engaba khona ekusetshenzisweni kwale mikhiqizo yokudla. I-Methyl gallate iyinhlanganisela ye-phenolic. Yi-methyl ester ye-gallic acid
Ukusetshenziswa kweMethyl gallate njenge-photosensitizer anti-corrosion agent ekuhlanzeni inqubo yemikhiqizo ye-semiconductor, edinga ikhwalithi ephezulu yobumsulwa ngokutholakala okuphansi kakhulu kwezinsimbi zokulandela umkhondo ukugwema isekhethi, kuzoshayela imakethe yezimboni kagesi eminyakeni ezayo.
I-GALIC ACID (%)
IPHUZU LOKUCISHA ℃
Langaphambilini I-Propyl Gallate （Ibanga Lokuphakela）
Olandelayo: IMethyl Gallate
I-Electronic Grade Methyl Gallate
IMethyl Gallate CAS No. 99-24-1 enekhwalithi ephezulu
Ikhwalithi ephezulu yeMethyl Gallate
Umhlinzeki weMethyl Gallate